Halke ayuu ku danbeeyey hankii Turkey-ga ee ka mid noqoshada Midowga Yurub? - Caasimada Online
Home Dunida Halke ayuu ku danbeeyey hankii Turkey-ga ee ka mid noqoshada Midowga Yurub?
Halke ayuu ku danbeeyey hankii Turkey-ga ee ka mid noqoshada Midowga Yurub?
By Hamdi Wardhere Mohamed
Wadanka Turkey-ga wuxuu waqtidheer xusulduub xoogan ugu jiray sidii uu uga mid noqon lahaa Midowga Yurub oo ah dalad ay ku mideysan yihiin dalal kuheshiiyey qodobo ay kamid yihiin siyaasadda, dhaqaalaha iyo isku socodka dadka. Ololaha uu Turkey-ga ku doonaayo inuu kaga mid noqdo Midowga Yurub ayaa soo bilowday 2005-kii, taasoo uu horboodayey xisbiga talada haya ee Cadaaladda iyo Horumarka (AK Party).
Wadahadaladii adkaa ee labada dhinac ay galeen waxaa Turkey-ga lasoo hordhigay 35 cutub ama sharuudood oo ay tahay inuu Turkey-ga soo buuxiyo si uu ugu guuleysto kamid noqoshada Midowga Yurub, sharuudahaas oo aan kugaar aheyn Turkey-ga laakiin ay tahay inuu kasoo gudbo wadan walba oo doonaya kamid noqoshada Midowga Yurub. Turkey-ga ayaa mudadii ay xowliga kusocdeen wadahadalada labada dhinac kuguuleystay inuu kasoo gudbo 10 kamid ah cutubyadii ama sharuudihii laga doonayey.
Arrinta waqooyiga dalka Cyprus ama Qubrus halkaas oo ay kunool yihiin bulsho asal ahaan kasoo jeeda Turkey-ga, taasoo sababtay in militariga Turkey-ga howlgal balaaran kula wareego sannadkii 1974-kii kadib xasilooni daro siyaasadeed, ayagoo sida ay sheegeen difaacaya rabitaan bulshadaas reer Turkey, arrintaas oo sii xumeysay xiriirka Turkey-ga iyo Greece oo ay asal ahaan ay kasoo jeedaan mujtamaca ugu balaaran ee dalka Cyprus. Midowga Yurub ayaa kucaadinaayey Turkey-ga inuu aqbalo inay ciidamadiisu kabaxaan waqooyiga Cyprus islamarkaana lagu daro dalka intiisa kale wallow uu Turkey-ga kabiyo diiday soojeedintaas.
Hab- maamul dowladnimo oo ku dhisan dimuquraadi oo ka hana qaada Turkey-ga: Tan iyo markii uu xisbiga haatan talada haya ee Cadaaladda iyo Horumarka lawareegay talada dalka waxaa jiray dareen weyn oo kadhex dhashay Turkey-ga iyo Midowga Yurub kaasoo salka ku hayey in xisbigan uu yahay muxaafid ku adag diinta Islaamka. Arrintan ayaa keentay inay dhinacyadu isku maandhaafaan micnaha iyo astaamaha dimuquraadiyadda.
Xisbiyadda siyaadda ee ka dhisan dalalka ku bahoobay Midowga Yurub ayaa ku kala aragti duwan arinta Turkey-ga ee kamid noqoshada ururka. Tusaale, xisbiyadda midigta dhexe oo ah xisbiyo afkaar adag laguna tiriyo muxaafidiin ayaa gabi ahaanba kasoo horjeeda in Turkey-ga kamid noqdo Midowga Yurub halka xisbiyada dhanka bidix ay taageersan yihiin in Turkey-ga loo ogolaado kamid noqosho buuxda ama mid qeyb ahaan ku xadidan qodoba hoose:
Turkey-ga ayaa ku gacan seyray soo jeedinta labadaan qodob, asagoo dareensan inaan dowladaha soo codsada kamid noqoshada Midowga Yurub si cadaalad ah loogu xaqsoorin , taasoo lagu tusaaleyn karo sida wadanka Croatia oo kamid ahaa Midowga Soviet-kii burburay oo ay isku waqti 2005-kii bilaabeen ololaha raadinta kamid noqoshada Midowga Yurub uu ugu danbeyn 2013-kii ku guuleystay inuu kamid noqdo ururka, taasoo Turkey lama filaan ku noqotay kuna kaliftay inuu dib uga fakaro arrinta Midowga Yurub.
Dhaqaaqyada Turkey-ga ka bilaabay dibadda
Kadib kacdoonkii gu’ga Carbeed iyo qilaafkii kadhex aloosmay wadamada Khaliijka, Turkey-ga waxuu garab istaag xoogan oo iskugu jira dhoofinta dalaga beeraha iyo mid ciidan u muujiyey dalka go’doonka dhulka iyo cirka lagaliyey ee Qatar.
Turkey-ga ayaa sidookale saldhig tababarka militariga ee TURKSOM ka furay Geeska Africa gaar ahaan dalkeena Soomaaliya.
Gulufkii xoogaanaa ee Turkey-gu ku qaaday kooxaha Kurdiga kusugnaa Syria ee taageerada ka heliyey dowlada Mareykanka oo muujisay hal adeyga Turkey-ga iyo sida uu u wajahay cadaadiska kaga imaanayey dowladaha ku bahoobay ururka NATO.
Marka la iskuwada geeyo dhamaan qodobadaan, waxay sare u qaadayaan meeqaamka awoodeed ee dalka Turkey-ga, taasoo soo bandhigaysa in Turkey-gu yahay ciyaaryahan muhiim ah oo ay tahay in wax laga weeydiiyo arrimaha dalalka uu kulug-leeyahay. Tilaabooyinkaan waxay Turkey-ga u abuureen saaxiibo cusub sidookalena u horseeday kala fogaansho Turkey-ga iyo saaxiibadiisii hore, ayagoo Turkey-ga xiligan u arka inuu isku badalay wadan seef la bood ah oo gacan kahadalka military kahormariya diblomaasiyadda.
In kasta oo aysan wali dhiman rajadii Turkey-ga ee kamid noqoshada Midowga Yurub, hadana ma muuqato ifafaalo muujinaysa wadahadalo miradhal ah oo ay galaan labada dhinac, waxaana cad inay waqtigan siikala fogaadeen dhinacyada ayna adkaaneyso sidii loo abuuri lahaa kalsoonidii hore.
Hamdi Wardhere Mohamed – Waxaad kala xiriiri kartaa Facebook: Xamdi Wardheere, Gmail: Zudeys9@gmail.com